June 8, 2021 - Amawpyay
လူတိုင်း လူတိုင်း တိုက်နဲ့ပဲ နေနေ၊ တဲနဲ့ပဲ နေနေ ဒါတွေ လုံးဝမလုပ်မိကြပါစေနဲ့နော်
လူတိုင်း လူတိုင်း တိုက်နဲ့ပဲ နေနေ၊ တဲနဲ့ပဲ နေနေ ဒါတွေ လုံးဝမလုပ်မိကြပါစေနဲ့နော်… လူတိုင်း လူတိုင်း အိမ်မှာ ဒါမျိုးတွေ လုံးဝ မလုပ်မိကြ ပါစေနဲ့။ (တန်ဖိုးရှိတဲ့ သိမှတ်စရာတွေပါ) အိမ်၌မပြု သင့် မထားသင့်သော ရှောင်ရန်များ သင်သိပြီးရင် မျှဝေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်… ၁။ အိမ်ရှေ့၌ငှက်ပျေားပင်မစိုက်အပ်။ ၂။ရေစိုအဝတ်များကို ညအချိန် သစ်ပင်ပေါ် အဝတ်တန်းပေါ် မထားရ ၃။ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ အပြောဆို မကြမ်းရ ၄။လက်ဖက်သုတ် စားပြီးကလေး၏ ပါးကိုမနမ်းရ ၅။ကတ်ကြေး၊ ကွမ်းညှပ်၊ ဓားစသည်တို့ကို ညှပ်စရာ မပါပဲ မညှပ် ရ၊မဖြတ်ရ ၆။ အိမ်ပေါ်၌ ဇယ် မခုတ်ရ။ ၇။အိမ်သား …
သင်္ဘောရွက်ကြိတ်ရေ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ
သင်္ဘောရွက်ကြိတ်ရေ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ နိုင်ငံတကာဆေးလောက ပညာရှင်တွေ အတည်ပြု ခဲ့ရတဲ့ ဆေးစွမ်းထက်တဲ့ သင်္ဘောပင်အရွက် ရဲ့ အာနိသင်ဟာ တကယ်ကို ဆေးဝါးအဖြစ် သုံးနိုင်ပြီး အာနိသင် ထက်မြက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေ တိုက်ဖျက်ပေးပြီး ကိုယ်ခံအား ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ သင်္ဘောသီးမှာ ဗီတာမင် အေ၊ စီ၊ အီးနဲ့ ဗီတာမင်ကေ စတဲ့ ဗီတာမင်ဓါတ် များစွာ ပါဝင်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် ကိုယ်ခံအားအောင်း ကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်များဖြစ်တဲ့ magnesium, potassium, niacin, carotene, proteins, fibers နဲ့ papain enzyme များ ပါဝင် ပါတယ်။ …
တခါတလေတော့ စကားပြောရင် တဖက်လူ နားညီးအောင် ပြောတတ်တဲ့ သောကြာသားသမီးလေးတွေအကြောင်း ..
တခါတလေတော့ စကားပြောရင် တဖက်လူ နားညီးအောင် ပြောတတ်တဲ့ သောကြာသားသမီးလေးတွေအကြောင်း သောကြာ သားသမီးလေး တွေကတော့ အရိုးသားဆုံး သူလေးတွေပါ သူတို့ဟာ အရာရာကို အလေးအနက် ထားတတ်ကြတယ် အပျင်း မကြီးတတ်ဘူး အစား မမက်ဘူး တခါတလေတော့ စကားပြောရင် တဖက်လူ နားညီးအောင် ပြောတတ်ကြတယ် မိသားစုအပေါ် အမြဲ အနစ်နာခံ တတ်တဲ့ သူတွေပါ….. သူတို့ဟာ ဘဝကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရင်ဆိုင်ရဲ ကြတယ် စိတ်တို လွယ်သလို စိတ်ပြေလည်း လွယ်တယ် ဒေါသမကြီးပေမဲ့ အငြိုးအတေး ကြီးတတ်ကြတယ် တစ်ခုခုဆို ခံစား လွန်းတတ်တယ် မျက်ရည် လွယ်တယ် ကိုယ် ခံစားရတာတွေကို ဘယ်သူ့မှ ပြောမပြဘဲ …
မိဘတွေကို ပြုစုလုပ်ကျွေးခွင့်ရတဲ့သူတွေဟာ အင်မတန်ကံကောင်းပါတယ်”
မိဘတွေကို ပြုစုလုပ်ကျွေးခွင့်ရတဲ့သူတွေဟာ အင်မတန်ကံကောင်းပါတယ်” ” မာတာပိတု ဥပဋ္ဌာနံ ” မိဘကို ပြုစု လုပ်ကျွေးခြင်း ဆိုတာ မင်္ဂလာ တရား တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးလေး အဓိပ္ပာယ်ဖော် လိုက်မယ် ဆိုရင် မိဘကို ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လေးလေးစားစား ရို ရိုသေသေ ပြုစုနိုင် တာဟာ ကိုယ့်အတွက် ကြီးပွားရာ ကြီးပွားကြောင်း အောင်မြင်ရာအောင်မြင်ကြောင်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ကိုယ်က မိဘကို ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြုစုရင် မိဘကလည်း ကိုယ့်အပေါ်မှာ အင်မတန် မေတ္တာ ကြီးမားတယ်နော်။ မိဘမေတ္တာကို ရနေတာကိုက အမှန်တော့ ကိုယ့်ဘဝမှာ တစ်နည်းအားဖြင့် …
သင့်အိမ်ကို ကံကောင်းခြင်းတွေ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်တဲ့ အဆောင်ယောင် အပြင်အဆင်များ
သင့်အိမ်ကို ကံကောင်းခြင်းတွေ ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်တဲ့ အဆောင်ယောင် အပြင်အဆင်များ ပရိသတ်တွေ အတွက်အခု တစ်ခေါက်ဖော်ပြပေး ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ နေအိမ်တွေမှာ ရိုးရှင်း လွယ်ကူလှတဲ့ နည်းလမ်း၊ အဆောင်ယောင် လေးတွေနဲ့ ကံကြမ္မာကောင်းတွေ ရရှိအောင် ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာချင်တာက ဒါဟာ ဘာသာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အယူ မျိုးတွေမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာက ယုံကြည်မှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ သာဖြစ်တယ် ဆိုတာကို တော့ကြိုတင်ပြီး အသိပေးပါရစေနော် ။ ၁။ အိမ်တံခါးအရောင် ကံကောင်းစေတဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးဖြစ်ဖို့ အတွက် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြင်ဆင်သင့်တာကတော့ အိမ်ရဲ့တံခါးမကြီးပဲဖြစ် ပါတယ်။ နာမည်ကျော် တရုတ်ဗေဒင်ဆရာကြီး ဖုန်းရွှဲ့ (Feng Shui) ရဲ့ …
နှဈခြို့နတေဲ့ အမာရှတျဟောငျးတှကေို လုံးဝပြောကျကငျးသှားစမေယျ့ လြှို့ဝှကျခကျြ (၅) မြိုး အမာရှတျတှရှေိလို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျမှုကငျးမဲ့နပေါသလား။ ဒါဆိုရငျတော့ ဒီနကေ့စပွီး ပြျောလိုကျပါတော့။ နှဈခြို့နတေဲ့အမာရှတျတှေ၊ ဝကျခွံအမာရှတျတှေ၊ ခွထေောကျက အမာရှတျတှနေဲ့ ခန်ဓာကိုယျပျေါက အမာရှတျမှနျသမြှကို ပြောကျကငျးသကျသာသှားစမေယျ့ နညျးလမျးလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ (၁) သံပုယို သံပုယိုရညျကို ရအေနညျးငယျရောလိုကျပါ။ ရလာတဲ့သံပုယိုရညျကို ဂှမျးစလေးနဲ့တို့ပွီး အမာရှတျတှပေျေါမှာလိမျးပေးလိုကျပါ။ ခွောကျသှားတဲ့အထိထားပွီးရငျ ရဆေေးပေးလိုကျရုံပါပဲ။ ဒီနညျလမျးလေးကို လုပျပွီးပွီးခငျြးနရေောငျအောကျကို မထှကျပါနဲ့။ ထှကျမယျဆိုလညျး နရေောငျကာခရငျမျ လိမျးပေးပါ။ (၂) ပြားရညျ ပြားရညျနဲ့မုနျ့ဖုတျဆိုဒါတို့ကို သသေခြောခြာရောမှပေေးပွီး အမာရှတျတှပေျေါကိုလိမျးလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ ၅မိနဈခနျ့နှပျထားလိုကျပါ။ အဲ့ဒီ့အပျေါကနေ တဘကျကို ရနှေေးမှာစိမျ၊ ညှဈပွီး အုပျထားလိုကျပါ။ တဘကျအေးသှားပွီဆိုရငျ ရဆေေးခလြိုကျလို့ရပါပွီ။ (၃) …
အကုနျအကနြညျးပွီး ကိုယျတိုငျလုပျနိုငျတဲ့ ဆနျနဲ့ မကျြနှာပေါငျးတငျနညျး (သို့) မကျြနှာလိမျးတဲ့ CREAM လုပျနညျး
အကုနျအကနြညျးပွီး ကိုယျတိုငျလုပျနိုငျတဲ့ ဆနျနဲ့ မကျြနှာပေါငျးတငျနညျး (သို့) မကျြနှာလိမျးတဲ့ CREAM လုပျနညျး သငျသိပါသလား? ဆနျပွုတျဆိုတာ စားဖို့ပဲမဟုတျဘူး စကှငျးကဲလို့လညျး ရတယျဆိုတာ…ဒီတဈပါတျရဲ့ topic ကတော့ “ဆနျနဲ့ မကျြနှာပေါငျးတငျနညျး (သို့) မကျြနှာလိမျးတဲ့ cream လုပျနညျး”ပါရှငျ့…စိတျဝငျစားစရာ အိမျတှငျးနညျးလမျးလေးမို့ Irene ကိုယျတိုငျလညျး လုပျကွညျ့ရငျး အဆငျပွတောကွောငျ့ အခုလို ပွနျလညျ sharing လုပျပေးရခွငျးဖွဈပါတယျဆနျကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး အသားအရအေတှကျ အငျမတနျအာနိသငျရှိတဲ့ သဘာဝထှကျကုနျတဈခုပါပဲ… ! အဓိကအားဖွငျ့…မကျြနှာတငျးရငျးစခွေငျး၊နုပြိုစခွေငျး၊အရေးအကွောငျးမြား ပြောကျကငျးစခွေငျး၊အသားအရကေို ပွနျလညျကနျြးမာစခွေငျး၊အရဓောတျဖွညျ့ပေးခွငျး၊နလေောငျအကှကျမြား၊ အမဲစကျမြား ကို ပြောကျကငျးစနေိုငျခွငျး စသညျ့ ဂုဏျသတ်တိမြားစှာ ပါဝငျပါတယျ ပွုလုပျပုံလေးကို ကွညျ့လိုကျရအောငျနျောဆနျ လကျတဈဆုပျစာကို ရဖွေငျ့ ၁ နာရီခနျ့စိမျထားပါ …
(၄) ကွိမျသုံးရုံဖွငျ့ သိသိသာသာ ဆံပငျမဲနကျ ၊ ဆံပငျအကြှတျရပျပွီး မကျြခုံးမှေးလေးတှပေါ ပေါကျလာစတေဲ့နညျး
(၄) ကွိမျသုံးရုံဖွငျ့ သိသိသာသာ ဆံပငျမဲနကျ ၊ ဆံပငျအကြှတျရပျပွီး မကျြခုံးမှေးလေးတှပေါ ပေါကျလာစတေဲ့နညျး ၄ခါအသုံးပွုရုံနဲ့ ဆံပငျကြှတျရပျ၊ ဆံပငျမဲနကျသနျစှမျးစပွေီး မကျြခုံးမှေးလေးတှပေါ ပေါကျလာစသေောနညျး2ပါတျအတှငျး ၉၅% ဆံပငျကြှတျသကျသာ၊ဆံပငျမဲနကျ သနျ စှမျးစပွေီး မကျြခုံးမှေးလေးတှပေါ ပေါကျလာစတေဲ့ သဘာဝနညျးလေး ဒီနညျးလေးက ယုမှနျကိုယျတိုငျစမျးသပျထားပွီး တကယျထူးခွားလို့ တငျပေးဖွဈတာပါ။ ၄ခေါကျလောကျ အသုံးပွုရုံနဲ့ ဆံပငျ ၉၅%အကြှတျသကျသာ မဲနကျသနျစှမျးစပေါတယျ။ ယုမှနျအရငျက ဆံပငျတှေ ကြှတျတာ ထိပျပါပွောငျတဲ့ အထိပါ။ ဆေးနညျးပေါငျးစုံ ကုခဲ့ပမေဲ့ အဆငျမပွခေဲ့ပါဘူး။ ထိပျပါပွောငျပွီး ဆံပငျတအားကြှတျလို့ အစခံရတဲ့အထိပါ။ ခု ဒီနညျးလေးကို စမျးသပျတာ ၄ခါမွောကျမှာတငျ ခေါ ငျးလြှျောရငျ ဆံပငျ ၁၀၀ …
မကျြနှာပျေါရနှေေးဝတျတငျခွငျး၏ အံ့မခမျးဖှယျအကြိုးကြေးဇူးမြား ဦးခေါငျး- ခြှေးပေါကျမြားကို ပှငျ့ စပွေီး သှေးလညျပတျမှုကို ပို၍ အားကောငျးစသေညျ။ ဆံပငျမြား သနျစှမျး၍ ဆံပငျပေါကျမှုကို အား ပေးသညျ။ မကျြနှာ- ခြှေးပေါကျမြားကို ပှငျ့စပွေီး အသားအရကေို နူးညံ့စသေညျ။ အစိုဓာတျဖွညျ့ဆေးရညျက အသား ထဲကို လှယျကူစှာ စိမျ့ဝငျစသေညျ။ မကျြလုံး- မကျြလုံးတဝိုကျရှိ ကွှကျ သားမြားကို ပွလြေော့စသေညျ။ လညျပငျး- တောငျ့တငျးခွငျး ကိုကျ ခဲခွငျး၊ ပုံခုံးကွှကျသားမြား ကိုကျခဲ ခွငျးကို သကျသာစသေညျ။ တကိုယျ လုံး သှေးလညျပတျမှုကိုပေး၍ ခေါငျး ကိုကျခွငျးကိုလညျး သကျသာစေ သညျ။ စိတျအပနျးဖွမှေုကို ရယူ လိုပါက Aroma oil (သို့) …
သာဓု ချေါဆိုရခွငျး၏ အကြိုးကြေးဇူးမြား တခြို့က သာဓု ချေါတဲ့ အကြိုးကိုပေါ့သေးသေး မှတျနကွေတတျတယျ။ သာဓု “တဈကွိမျ” ချေါခဲ့ရငျတောငျနတျပွညျထိ အကြိုးပေးပါတယျ။ ဝိမာနဝတ်တုမှာ နတျပွညျရောကျကွောငျး(၈၆)ခု ရှိတယျ လို့ ဟောကွား ထားပါတယျ။ သောတာပနျ ဖွဈပွီး နတျပွညျရောကျတာ (၅)ခု ၊ဘုရားကို ကွညျညို၍ လကျအုပျခြီယုံက (၂)ခု ၊ကြောငျးအလှူပှဲတှငျ သာဓု ချေါယုံမြှနှငျ့(၂)ခု သီလ သကျသကျ ဖွညျ့ကငျြ့ယုံမြှဖွငျ့ (၂)ခု ၊ဒါန၊ သီလ ပူးတှဲကငျြ့တာက (၇)ခု ၊ဒါန သကျသကျဖွငျ့ (၆၈)ခု ဗုဒ်ဓ ဘာသာ ဖွဈရခွငျး အကြိုးကိုပေါ့သေးသေး မမှတျကွပါနဲ့။ တသကျလုံး ကွိုးစားရှာဖှလေို့ ရရှိလာတဲ့လူ့စညျးစိမျကို ကွီးကယျြခမျးနားတယျ ထငျနကွေတယျ။ …